Ubutofotofo beHale Keala eFairway Villas Waikoloa
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguChaynalei
Ewe! Wamkelekile kwiHale Keala entle, indlela yakho eya kwezona ndawo zintle zokutyela, ezivenkileni kunye neelwandle kwiSiqithi esikhulu saseHawaiʻi. IHale Keala yimizuzu engama-22 yokuqhubela eMantla ecaleni koNxweme lwaseKohala oluphefumlayo. Lo mgangatho ophantsi, igumbi lokulala eli-2/2 lokuhlambela liza ne-A/C, ukufikelela kwi-Wi-Fi, indawo yokupakisha egciniweyo, i-infinity pool, i-lava-rock whirlpool spa, iiBBQ zegesi, indawo yokomelela, izitepsi ezisuka kwiivenkile zeeKumkani kunye neQueens. Indawo yeMarike kunye nomgama wokuhamba ukuya `Anaehoʻomalu Bay.
I-Hale Keala ikwindawo yokuhlala enesango kwaye uya kuba nakho ukufikelela kwi-condo usebenzisa ikhowudi yokungena engenazingcingo. Njengondwendwe, uya kukwazi ukonwabela zonke izinto eziluncedo ezibonelelwayo okanye ungaphumla kwi-lanai (ipatio) ngelixa usonwabele imbonakalo entle ejongene neLake Kings kwibala legalufa kunye nendawo enkulu yengca enokudlalwa ngabantwana.
I-Hale Keala inezinto ezininzi eziluncedo ezifana nokuhamba umgama ukuya kwi-Starbucks, i-Island Gourmet Market kunye nevenkile yezipho (i-ABC Store) yokuthenga ivenkile kunye ne-sundries, i-Waikoloa Luxury Cinema yamava okugqibela e-movie, iintlobo ezininzi zeendawo zokudlela ezikufutshane ezifana ne-Roy's, i-A-Bay's Grill. , Sansei, Macaroni Grill, Lava Lava Beach Club, Fosters Kitchen, Original Big Island Shave Ice, kunye nokunye! Kwakhona, ukuthenga okugqwesileyo kuzo zonke iimfuno zakho ezinje ngeePearls zeSiqithi, iNa Hoku, iMahina, iPacSun, iReyn Spooner, uMichael Kors, iTiffany & Co., nokunye okuninzi!
Umbuki zindwendwe ngu- Chaynalei
Ndingumhlali kwisiqithi saseHawaii kwaye ndingumzuzu omfutshane we-25 ukuhamba. Ukuba uyandidinga buqu ndingazama ukuzenza ndifumaneke ngexesha lokuhlala kwakho.
Inombolo yomthetho: STVR - 20 - 401166
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Waikoloa Village